China Fanny ngwugwu maka Women & Men Unisex Waist Bag Pack with Headphone Black for Outdoors & Gym Manufacture and Factory | Onye Ọchụchọ Ọhụrụ
Fanny ngwugwu maka Women & Men Unisex Waist Bag Pack with Headphone Black for Outdoors & Gym
Ngwaahịa: HT 054012
Nha: 16.5 * 6 * 4.3 inch (42 * 15 * 11cm)
Agba: Dị ka foto & ngwaahia & soro warehuose si avaible ákwà
FOB Ahịa: USD4-USD7
* Ihe eji eme ihe bu nylon nwere ezi ikuku nke ikuku. Uwe ahụ dị nro. Ihe mkpọchi ahụ bụ ihe nchara nchara na ihe na-eme ka ọ dị mma. nwere ike ijide Iphone 7/8 / X Plus.
* The azu paaki size bụ banyere: 16.5in x 6in x 4.3in, dumplings anya, na abụọ dị iche iche compartments na zipa, onye ọ bụla ogige imewe nwere ike inyere gị ezi uche igbunye na-echekwa ihe onwe onye, ​​na mfe ma kensinammuo mkpọchi uwe imewe pụrụ inyere gị aka ịchọta ihe ngwa ngwa na ozugbo.
* Ike dị n'ime ya buru ibu iji jide ihe dịka obere akpa ekwentị mkpanaaka, na-akwụ ụgwọ akụ na ihe ndị ọzọ. Ala ma na ebugharị, ọ gaghị agbagọ na convex n'ihi na nchekwa.
* The àgwà nke Fanny mkpọ dị mma, nkechi bụ ike, ubu belt bụ kemeghi, kọmpat na ezi uche imewe agaghị eme ka ahụ gị na-eche njide na erughị ala, eriri bụ ike, ya mere na usoro nke na-agba ọsọ, bouncing na na achọrọghi ichegbu onwe gị banyere eriri ahụ iji weta ibu na nsogbu, ọ dabara maka ndị otu ezinụlọ niile afọ.
* Emebere igwe okwu ekwe ntị iji mee ka ọ dịrị ya mfe ige egwu ma jiri ọrụ nke ịkpọ oku n'oge mmega ahụ na ahụike, ka ị nwee ike ịhapụ aka gị iji nwee ọ sportsụ oge egwuregwu gị. Ọtụtụ ụzọ iji eyi akwa a - can nwere ike iyi ya n'úkwù gị, laghachi n'úkwù gị, kpoo obi gị ma ọ bụ n'ubu gị.
* Afọ ojuju Gurantee: 100% afọ ojuju nkwa akwụkwọ ikike na enyi na enyi ahịa ọrụ: Echegbula banyere ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla gbasara ihe ahụ, biko egbula akpọtụrụ anyị. (Site na iwu, ị nwere ike ịchọpụta: Kpọtụrụ onye na-ere ahịa) Anyị ga-anọnyere gị!
Nke gara aga: Adịchaghị reusable nri nri akpa - Zuru okè ppingzụ ahịa akpa, Beach akpa, Travel akpa
Osote: Women Portable ịchọ mma Bag Mara mma Makeup Travel Case Case Multifunctional Mee elu akpa, ilelọ Mposi akpa Travel akpa maka Women Girls
Men Small èbè Bag Crossbody paaki Travel D ...
New abịa Fashion ajustabe eriri Waistbag Sp ...
Bè akpa Crossbody Igbe Bag 9,7 inch Ipad ...
Anti-Thief èbè akpa - ebughibu, fechaa ...
Kenkwucha Jirinụ èbè Bag Obere N'èzí Igbe ...
Bè akpa Men Women Jirinụ azu paaki Small ...R ...